Ukucoca i-IP yakho Idilesi - Semalt
Nakuphi na umrhwebi-ntanethi, ukwenza i-intanethi ye-intanethi ngokufanelekileyo ingaba yimpumelelo eyenza ukuba ishishini liphumelele. Kwabaninzi be-webmasters, ukufumana ukubonelela ngeendwendwe kwiwebhusayithi yakho kuyona nxalenye ephambili ye-e-commerce impumelelo. Iziza ezahlukeneyo zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokufumana ugaxekile kwiiwebhusayithi zazo. Kwiimeko ezininzi, i-intanethi iyamkela iifayile kwi-akhawunti yomsebenzisi we-Google, ebonakala ngathi inezinga elithile lokuthunyelwa kogaxekile. Iindawo ezininzi zorhwebo zilawula ukuhamba kwazo kunye nabaxumi ngokusebenzisa idilesi ye-IP. Le nto ithetha ukuba kunokwenzeka ukubeka iliso umntu okanye ikhompyutha yomsebenzisi ngokulula usebenzisa ikhukhi.
UJack Miller, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo we-10 (Semalt , ucinga ukuba unokunyusa ukuchaneka kwedatha yakho ye-Google Analytics ngokukhuphela ngaphandle kwendlela, ephuma kubasebenzi bakho beenkampani. Uninzi lwezi tyelelo luyilinga kwaye aluyi kuphumela ekuthengeni ukwenza ukuba yonke idatha isetyenziswe. Ezinye iindawo zokutyelela i-spam zivakaliswe ngendlela efana nechaphazela ezinye iipeliti ze-IP ezithile. Kungabalulekile ukusebenzisa ezinye izihlungi eziphambili ze-Google Analytics. Ezinye zeendlela eziqhelekileyo zokwenza oku zinokubandakanya ukuzenzekelayo iifayile kwi-Google Analytics Admin panel.
Ugaxekile logalelo luyimilayezo evela kummandla oqhelekileyo. Ezi i-imeyile ezigaxekile zihlala ziqulethe imiyalelo ethe tye ukwenza amaxhoba angabonakaliyo ukuba alahlekelwe ulwazi oluxabisekileyo. Yingakho kukho iifayile ezikhethekileyo ze-Google Analytics ezidalwe ukuhlangabezana nale ngxaki. Ezi zihlungi zivimba ibhendi ye-botnet ephuma kwiindawo zokugawula i-spamming. Le milinganiselo inokukhusela iwebhusayithi yakho kwezinye zezilwanyana ezihlaselwa rhoqo. Ngokomzekelo, abahlaseli bangabamba ulwazi lwekhadi lesikweletu kunye nolunye ulwazi oluxabisekileyo kubantu abanokungaziboneli ngeendlela ezahlukeneyo. Ezinye zeendlela ezazisasazekayo ezisetyenziswe ngabaphuli be-cyber zibandakanya ukuhlaselwa kwesohlwayo kunye nokuhlaselwa kwesiza.
Ukucoca idilesi yakho ye-IP
Yakha i-akhawunti ye-Google Analytics okanye ungene kwi-akhawunti yakho ukulawula idilesi ye-IP kule paneli. Okokuqala, kufuneka unamathele kwisiqalo se-IP senkampani yakho. Oku kuthetha ukuba kufuneka usebenzise ibhodi ye-router yesiqhelo kwishishini lakho, elingaqwalaselwa kwi-IP static. Ukusebenzisa imithombo emininzi ye-intanethi kunokukwenza ukuba izixhobo zithathe idilesi ye-IP enamandla, enokuba nzima ukuyilandela. Ngokomzekelo, iifowuni ezifikelela kwi-intanethi kwi-broadband yeselula ingaba nekheli le-IP elinamandla. Phakathi kwezi zixhobo zifowuni kunye namacwecwe asebenzisa isevisi yesicwangciso senkcukacha zenkampani.
Kwipaneli yomlawuli, unokhetha isihlunu esiqhelekileyo. Kule meko, unako ukufaka idilesi ye-static ye-intanethi oyifunayo ngaphandle kweGoogle Analytics. Ngenxa yoko, uza kufumana iipolisi ezahlukeneyo kunye nee-IP, efuna ukuyikhuphela ngaphandle kwendlela yakho. Ezi zicwangciso zifumaneka apha. Kwakhona kunokwenzeka ukugcina ukuthunyelwa kogaxekile kunye neendlela zabo zendlela ngokusebenzisa isihlunu senkcubeko.